Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Chorus Aviation Inc. dia nanambara ny fifidianana ny Directeur
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao • People • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Faly i Chorus mandray an-dRamatoa Gail Hamilton, Andriamatoa Alan Jenkins ary Andriamatoa Paul Rivett ho ao amin'ny filankevi-pitantanana ao aminy.
Ny boriborin'ny proxy Chorus dia natolotra ho an'ireo voatendry 10 ho an'ny filankevi-pitantanana.
Ny isan'ny fifampizarana izay soloin'ny tompon'andraikitra tonga manatrika sy ny proxy nandritra ny fivoriana dia 60,142,910 tapitrisa.
Ireo mpihazona ny isan'ny fizarana ilaina dia nifidy hanohana ny entana rehetra amin'ny asa aman-draharaha.
Chorus Aviation Inc. dia manambara ny valin'ny latsa-bato amin'ny fifidianana talen'ny talen'ny fivoriana isan-taona ataon'ireo tompon-tany natao tamin'ny 21 Jona 2021.
Ny totalin'ny anjara asan'ny tompon'andraikitra tonga manatrika sy ny proxy nandritra ny fivoriana dia 60,142,910 33.85 tapitrisa ary naneho ny 10% ny anjara navoakan'i Chorus izay manana zon'ny mpifidy. Ireo mpihazona ny isan'ny fizarana ilaina dia nifidy hanohana ny entana rehetra amin'ny asa aman-draharaha. Ny boriborin'ny proxy Chorus dia natolotra ho an'ireo voatendry XNUMX ho an'ny filankevi-pitantanana. Ny valiny amin'ny antsipiriany momba ny latsa-bato amin'ny fifidianana ireo mpitantana dia voalaza etsy ambany.
atolotra hofidiana Votes For % Ho an'ny Voatazona ny latsa-bato % Nihazona
R Stephen Hanas 59,563,039 99.04% 579,871 0.96%
Faly i Chorus mandray an-dRamatoa Gail Hamilton, Andriamatoa Alan Jenkins ary Andriamatoa Paul Rivett ho ao amin'ny filankevi-pitantanana ao aminy. Ramatoa Hamilton dia mpiara-miasa amin'ny KPMG sy Ernst & Young izay manome serivisy mpanolotsaina ho an'ny orinasa sy orinasa marobe, anisan'izany ny indostrian'ny fiaramanidina. Andriamatoa Jenkins dia manana traikefa zokinjokiny efa 20 taona mahery sy birao amin'ny sehatry ny fampanofana fiaramanidina, vola manokana, fiaramanidina, fitaterana ary serivisy ara-bola. Ankoatry ny mpiara-manorina NordStar Capital (mpampiasa vola vao haingana tao Chorus), Andriamatoa Rivett dia filohan'ny Fairfax Financial Holdings Limited teo aloha izay tompon'andraikitra tamin'ny famatsiam-bola 2016 tapitrisa dolara an'ny orinasa tao Chorus izay renivohitra masomboly. ho an'ny orinasam-panofana fiaramanidina isam-paritra.
Chorus dia mpamatsy vahaolana eran-tany amin'ny seranam-piaramanidina. Manana ny foibeny ao Halifax, Nova Scotia, i Chorus dia ao amin'ny Chorus Aviation Capital izay mpampidina eran-tany ny fiaramanidina isam-paritra, ary ny Jazz Aviation ary ny Voyageur Aviation.